Xaruntu Xuquuqal Insaanku waxaay ugu baaqaysaa dawladda inay xorriyadooda u soo celiso laba siyaasi oo xidhan – HRC Somaliland
Xaruntu Xuquuqal Insaanku waxaay ugu baaqaysaa dawladda inay xorriyadooda u soo celiso laba siyaasi oo xidhan
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxaay ugu baaqaysaa dawladda Somaliland inay xoriyadooda u soo celiso siyaasiyiin mucaarad ah oo xidhan.
Maxamed Sidiiq Dhame, gudoomiyaha Garabka Dhalinyarada iyo Yoonis Axmed Yoonis, Xoghayaha Ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani waxa laga xidhay xafiiska Waddani ee gobolka Hargeisa 11kii April 2017.
Maanta ayaay Maxkamadda Gobolka Hargeysa rumaan garaysa todob cisho oo xadhig ah. Waxa lagu eedeeyey inay dacaayad been ah fidiyeen iyo inay ka qayb galeen isku soo bax looga dan lahaa in dembi lagu galo, sida ay sheegayso eedaha hordhaca ah ee loo soo gudbiyay maxkamadda.
11ki April ayay Dawladda Hoose ee Hargeysa burburisay deyrar guryo ku yaal seked ka mid ah kuwa ku yaal badhtamaha Hargeysa. Dad degan guryahaas ayaa ka mudaharaaday burburinta. Labada siyaasi ee la xidhay waxaay ku canbaareeyeen dawladda burburinta deyrarka.
Mucaaradku waxaay dawladda hoose ku eedeeyeen inay u burburisay deyrarka si ay ugu banayso hudheel la sheegay inay leedahay Marwadda Kowaad. Duqa Hargeysa oo warbaahinta la hadlay wuu beeniyay eedaas isaga oo sheegay inay ka mid tahay hawlaha caadiga ah ee dawladda hoose ku banayso wadooyinka ee aanay ahayn mid hudheelka loo sameeyey.
Xarunta Xuquuqal Insaanku aad bay uga walaacsan tahay xadhiga loo gaysto dadka dawladda dhaliila. Hada waxa xidhan suxufi Cabdiraxmaan Carab Daauud oo ka tirsan Hangool News. Waxa loo xidhay eedo ku saabsan warbixin uu qoray bogga interneetka ee Hangool News oo ku eedeyey Taliyaha Booliiska qabyaalad iyo eex.
Xaruntu waxaay ugu baaqaysaa dawladda inay xorriyadooda u soo celiso labada siyaasi ee xidhan, iyo suxufi Cabdiraxmaan Carab Daauud.